गुल्मीमा घ’ट्यो अ’चम्मको घ’टना! फेसवुकमा माया बसेसँगै रा’त बि’ताएपछि थाहा भयो यस्तो!(भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > गुल्मीमा घ’ट्यो अ’चम्मको घ’टना! फेसवुकमा माया बसेसँगै रा’त बि’ताएपछि थाहा भयो यस्तो!(भिडियो)
admin June 10, 2020 June 10, 2020 भिडियो, समाज 0
हामीले सामाजिक सञ्जाल र अन्तराष्ट्रिय समाचारमा कहिले काँही न’चिनेरै दाजुवहिनी र आफन्तमै प्रेम र विवाह भएका विषय सुन्ने गरेका छौं । तर, यहाँ भने गुल्मीमा भएको त्यस्तै समाचार र भिडियो प्रस्ततु गरिएको छ । युवक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा थिए ।
मदानी गाउँपालिका ४ काभ्रेगाउँकी २३ वर्षकी मिना कुँवरले फेसवुकमा निकै मा’र्मीक स्टाटस लेखेकी थिइन् । घरको आर्थिक अ’वस्था क’मजोर भएर विदेशीएका दाजु भारतमै ह’राए । उनको पनि खबर छैन ।
त्यसैले मिनाकै काँ’धमा वृ’द्ध भएका आमावुवालाई पनि स’घाउने जि’म्मेवारी आयो । त्यसैले उनी गुल्मी छो’डेर काठमाडौं आइन् । १२ कक्षामा पढ्दै गरेकी मिना सामाजिक सञ्जालमा सकृय थिइन् । काठमाडौंमा १२ कक्षामा पढ्दै थिइन् । उनीसंग फेसवुकमा एक युवक पनि जो’डिन्छिन् ।
लामो समय सम्म उनी युवकसंग फेसवुकमै कुराकानी हुन्छ । चिनजानवाट सुरु भएको त्यो सम्बन्ध प्रेममा प’रिणत हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवक आफ्नो गाउँ फर्कने बताउँछन् ।
खुशीकाे खबरः आज एकैदिन ९० जनाले कोरोना जितेर घर फर्किए